Sida loo helo meel ay ku noolaadaan | USAHello | USAHello
Ma waxaad raadineysaa meel ay ku noolaadaan? Housing ee USA inta badan waa qaali. Waxaa laga yaabaa in ay adag tahay in la helo meel fiican inaad ku noolaato xaafad nabad ah. Waxaad sidoo kale laga yaabaa inay wareersan by sida loo helo meel ay ku noolaadaan. Boggan wuxuu siiyaa macluumaad muhiim ah oo ku saabsan biilasha bixinta, ku nool deriska dhow, iyo lahaanshaha guriga.
Gurigaagu waa meel muhiim ah. Waxaa jirta odhaah ee dalka Mareykanka: “Home waa meesha wadnaha waa.” Taas macnaheedu waa guryaheena jirka - meelaha aan ku nool nahay - dadka iyo waxyaalaha aan jeclahay astaan. Qaxooti badan qaadan kibir guryahooda cusub. Lahaanshaha ammaan ah, meel raaxo leh in ay ku noolaadaan ka caawin doontaa ka dhigi Maraykanka dareemayaa guriga. baahida guryaha Refugee way kala duwan yihiin, waayo qoys kasta, laakiin waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo guryaha ka soo xusho.
Kiraysiga meel lagu noolaado
Homes ee dalka Mareykanka waxay noqon kartaa guri (qayb is-jira ee dhismaha weyn a) ama guri hal. inaad kireysato guri, waa in aad bixiso lacagta bil kasta milkiilaha. Waxaad saxiixi doona heshiis kiro, taas oo ah heshiis ayaa sheegay in aad kirada iyo biilasha kale bixin doonaa bil kasta.
Wadaagista guri ama guri
guryaha la wadaago waxay ka dhigan tahay guri ama guri dabaq ah waxa Americans wac aad kireysato degganahay - dadka kale ee ku nool guriga isku mid ah ama guri adiga iyo qoyskaaga la. Waxaa inta badan ka jaban tahay kiraysiga meel adiga kuu gaar ah sababtoo ah waxaad kala dillaaci kartaa kharashka kirada iyo biilasha (korontada, kululaynta iwm). Sida caadiga ah qof walba uu leeyahay qol u gaar ah oo ay wadaagaan qolka fadhiga a, jikada iyo musqusha.
Gadashada guri oo dalka Mareykanka ah waa qaali. Marka aad guri iibsato, aad caadi ahaan u baahan yihiin in ay leeyihiin lacagta badbaadiyey inay bixiso lacag hormaris ah (boqolkiiba ee kharashka guud ee guriga), ka dibna waxa aad inta badan amaahato lacag si loogu bixiyo inta kale ee guriga. bil kasta aad bixiso lacag deyn aad u bangiga lacag aad amaahatay. Marka aad guri iibsato, waxa kale oo aad leedahay kharashyo kale, oo ay ku jiraan caymiska, canshuuraha iyo dayactirka guriga.
Raadinta meel aad kireysato
Helitaanka meel aad kireysato waa adag. Waxaa had iyo jeer waa tartan badan oo loogu talagalay guryaha kirada la awoodi karo. Waxaa jira laba nooc oo ah guryaha waxaad isku dayi kartaa marka aad raadinayso meel ay ku noolaadaan oo ku saabsan dakhliga kooban:
guryo la awoodi karo
Magaalooyinka waaweyn iyo kuwa yar yar qaar ka mid ah, waxaa ka jira ururo aan macaash doon ahayn iyo hay'adaha dowladda oo hoy siiya dadka dakhligoodu hooseeyo. Nasiib darro waxaa sida caadiga ah waa sugidda dheer guriyayn jaban. Laakiin haddii ay jiraan guryo la awoodi karo meesha aad degan tahay, waxaa inoo wanaagsan si aad u hesho liiska sugitaanka. Hay'adda la-talinta guryaha ah ayaa kuu sheegi kara waxa guryo la awoodi karo waxaa laga heli karaa. Waxaad ka raadin kartaa in baalal labada hay'adaha guryaha dadweynaha degaanka iyo hay'adaha la-talinta meesha aad degan tahay.
Waxa kale oo aad ka raadin kartaa urur maxalli ah in aad bulshada ee FindHello. Dooro luqadaada, markaas dooran magaalo aad. ka dibna dooro “Housing & Cuntada.” Haddii ay jiraan wax ku qoran ee aad bulshada, baadhaan internetka. Nooca “guryo la awoodi karo in [magacaabi magaalada aad].”
Kiraynta gaarka ah
Kiraynta gaarka ah Cheap is buuxiyey sida ugu dhakhsaha badan ay waxaa lagu xayeysiiyaa. Waxaad u baahan doontaa in la helo liiska ugu wanaagsan oo iyaga ka hubi maalin kasta. bogagga liiska qaar ka mid ah ku wargelin doono markii xayeysiis cusub posted. Halkan waxaa ku qoran liiska goobaha la kireysto guri iyo apps fiican. Bogga internetka ee craigslist waa goobta ugu used waayo, guryaha kirada. Laakiin on Craiglist, aad leedahay si taxaddar dadka isku dayaya in ay aad khiyaameeyaan. Qaar ka mid ah xayeysiiska waa been abuur. Marna lacag ama macluumaad shakhsi ah in qof kasta u soo diri online. marnaba u baahan tahay inaad bixiso kirada ilaa aad heshiis.
laga yaabaa in aad rabto in aad kiraysato meel adiga kuu gaar ah, gaar ahaan haddii aad ka sii badan yihiin hal qof kaliya. Laakiin inta badan waxaad yeelan doontaa fursad wanaagsan oo ah helida meel haddii aad ku taameysid in guri ama guri la wadaago. Tani waa run gaar ee weyn culayskan meesha kirada waa mid aad u sarreeya. Sharing ka dhigan tahay ma ahan oo keliya wadaaga ijaarka, laakiin dadka kale ee ka shaqeeya la wadaago oo dhan kharashaadka kale. Haddii aad diyaar u yihiin inay la wadaagaan, dhab ahaantii laga yaabaa inaad meel gooyeen, la meel dheeraad ah ama la yard ah, maxaa yeelay la degganahay aad awoodi karin wax ka wayn.
Ijaarashada iyo xuquuqda
Haddii aad kiraysanayso guri, waxaad leedahay xuquuq dhowr ah. Waxaad xaq u leedahay in ay ku noolaadaan meel daahir, leedahay dhiqle lahayn, oo uu leeyahay kulaylka iyo biyo. In Maraykanka, waxaa jira sharci ah in milkiilaha ma takoori karo ka dhanka ah. Taas macnaheedu waxa weeye ma mulkiiluhu kuma odhan karto codsiga aad kirada sababtoo ah jinsiyaddaada, qowmiyadda, ama diin. Waxaa sidoo kale jira sharciyo gaar ah ee gobolo kala duwan oo ku saabsan sida badan dadka ku noolaan karaan in aad guriga iyo waxa waa in kireeyuhu aad for. Hud.gov waa website waxbarasho oo ku saabsan guryaha. Waxaad baran kartaa waxyaabaha ku saabsan takoorka guriyeynta iyo xuquuqda kiraystaha ee gobolka.
Saxiixa heshiiska kirada
lease A waa dukumenti qoran in aad saxiixdo marka aad kiraysato meel ay ku noolaadaan. heshiiska kirada waa heshiis u dhexeeya adiga iyo mulkiilaha, milkiilaha unugga kirada. In heshiiska, aad ogolaato inaad bixiso kirada iyo biilasha waqtiga bil kasta iyo mulkiilaha ogolaado in ay bixiyaan ammaan ah iyo fayadhowr (oo nadiif ah oo cayayaanka lahayn) unit kirada.
Ka hor inta aadan calaamad
Ka hor inta aadan saxiixin heshiiska kirada, loo hubiyo in ay eegaan unugga kirada mulkiilaha. Haddii ay jiraan wax jebiyo, ama haddii meesha waa wasakh, weydii mulkiilaha in ay qoraan in hoos heshiiska. Sidaas waxaad yeelan doontaa cadayn ka dib in aad kama ay jebin wax ama aad u wasakh.
Bixinta lacag dhigaal ah ammaanka
Marka ugu horraysa ee aad u soo guurto, laga yaabaa in aad lacag deebaaji ah. Lacagtan waxaa lagu hayaa by mulkiilaha ilaa aad ka guurto ay dhacdo in aadan bixin kiradaada, ama haddii aad ka dhigi unugga kirada aad u wasakh oo ay leeyihiin in ay bixiyaan in la nadiifiyaa. Haddii aad bixiso kiradaada oo nadiif ah guriga marka aad ka guurto, markaa waa in aad hesho lacag deebaaji aad idiin ku soo laabtay. Qaar ka mid ah heshiisyada aad u baahan tahay si aad u nadiifiso rooga si ay dib ugu hesho deposit. U hubso in aad u hubiso in rooga in aad guriga waxaa loo nadiifiyaa markaad soo degtay. Haddii aan la nadiifin, weydii mulkiilaha in ay ku riday qoraal in aanad haysan si aad u nadiifiso rooga. Haddii aadan haysan waxaad si aad u nadiifiso rooga, waxaad kiraysan kartaa mashiinka a qiimo hooseeyo halkii isagoo si ay u bixiso shirkad lacag badan si aad u nadiifiso rooga.
Heshiisyada waxaa u saxiixay tiro cayiman oo bilood. kiro intooda badan waa lix bilood ama hal sano. Waxa kale oo laga yaabaa in aad awoodid in aad saxiixdo heshiiska kirada bil-ka-bil. Taas macnaheedu waxa weeye inaad ka guurto karaa wakhti kasta oo aad rabto in aad. Si kastaba ha ahaatee, sida caadiga ah aad weli in aan u sheego mulkiilaha bil ka hor in aad u guurto doonaa, oo waa inaad bixiso kirada iyada oo loo marayo dhamaadka heshiiska.
heshiiska Inta badan waxaad u baahan doontaa in la siiyo tiro cayiman oo maalmo’ aragto ka hor inta aad ka guurto. Haddii aad doonaysid inaad ka guurto kirada, iska hubi heshiiska si aad u aragto sida ay maalmo badan ka hor wakhtiga aad u baahan tahay inaad u sheegto milkiilaha guriga uu kuu soo wareegi doonaan.
Mail iyo biilasha
Marka aad hesho meel ay ku noolaadaan, waxaad u baahan doontaa inaad bixiso biilasha waqtiga. Waxaad u badan tahay in ay heli doonaan, waayo, biilasha korontada iyo biilasha kale ee boostada.
Kirada waa caadi ahaan sabab Maalintii ugu horraysay ee bisha ama maalinta bisha in aad marka hore u dhaqaaqay in. Isku day in aad mar walba bixiso kiradaada la isticmaalayo jeeg, halkii ay lacag caddaan ah. Had iyo jeer weydii rasiid si aad cadeyn u tahay in aad bixisay.
Weydii mulkiilahaada meesha aad boostada ku yaalaa oo hubi inaad si joogto ah u hubi mail. Waxaad u baahan doontaa inaad buuxiso foomka xafiiska boostada haddii aad guurto. Marka aad buuxiso, aad mail loo soo diri doonaa in aad cinwaanka cusub.
Sida caadiga ah, waxaad u baahan doontaa inaad bixiso biilasha aad ku jirto korontada, gaaska dabiiciga ah ama saliid, biyaha, TV / internet, telefoonka, qashinka, bulaacada, iwm. Mararka qaarkood, qaar ka mid ah ama korontada oo dhan waxaa ka mid ah in aad kirada, laakiin inta badan aad u leeyihiin in ay si gaar ah u bixiso. Waxaad badbaadin kartaa lacag on biilasha aad xejisto kulaylka hooseeyo iyo xidhashada dhar diiran ee guriga, iyo deminta nalalka bareesada qalabka elektarooniga ah marka ay aan loo baahnayn.
Gadashada guri malaha waa gadashada ugu weyn ee aad abid ka dhigi doonaa. Waxaa jira badan oo arrimaha sharciga kuu, bangiga, iyo qofka guriga iibinaya. US Department of Housing iyo Horumarinta Magaalooyinka ayaa macluumaad weyn oo ku saabsan gadashada gurigaaga ugu horeysay iyo barnaamijyo-markii ugu horeysay oo iibsada dakhligoodu hooseeyo guriga.
Waxaad ka eegi kartaa si aad u ogaato barnaamijyada homebuying inuu kaa caawiyo inaad guri iibsato magaalada ama gobolka aad.
Smartasset.com ayaa qalab fiican si ay u caawiyaan aad go'aansato in aad kireysato ama iibsato guri. Waxay kaa caawin karaan in aad baratid haddii aad awoodi karin inuu guri ka iibsado.
Waxaa had iyo jeer waa muhiim in la leeyihiin xiriir wanaagsan la deriskaaga, meel kasta oo aad ku nooshahay. Laakiin xiriirka this laga yaabaa in uu ka duwan yahay wadankaada hooyo. Tusaale ahaan, wadanka aad, laga yaabaa in aad soo booqato deriskaaga wakhti kasta oo ah maalintii. In USA, dadka inta badan wac ka hor inta aysan booqan saaxiib ama deris. Sidoo kale waxaad isku daydaa inaad ixtiraam deriskaaga. Dad badan oo Maraykan ka fekeraan hantidooda sida hanti gaar ah. Iyagu ma jeclaan laga yaabaa in haddii aad ku socotaan ay dayrka ama park hore ee gurigooda.
Sidoo kale waa in aad ogaataa inta qayladii aad samaynayso. Isku day inaad xasilloonaataan oo u dhexeeya 8 p.m. iyo 8 a.m., waqtiga caadiga ah ee inta kale ee USA.
Haddii aad yeeshaan xiriir wanaagsan la deriskaaga, wanaagsan ee qoyskaaga waxay noqon kartaa. Marka deriska cusub guurin, aad naftaada ku bilaabi kartaa oo waxaad iyaga keentaa cunto ama saxan ee kuula dhaqmo.
Haddii aad dhibaato ka qabo mid ka mid ah deriskaaga, isku dayaan in ay ka hadlaan iyaga oo sharax xaalada. Tusaale ahaan, haddii qof isagoo cod weyn habeenkii, warsato xunna haddii ay noqon kartaa mid aamusan, maxaa yeelay, carruurtaada aad la hurda. Haddii aad u baahan tahay caawimaad dheeraad ah waxaad u sheegi kartaa milkiilaha ku saabsan dhibaatada oo weydii in aad la hadasho deriskaaga.
Iska Ilaalinta on warbaahinta bulshada